Ingxenye Eyisisekelo Yezinsimbi Zama-Electronic - Izinsiza Zokuhlola | I-HVC Capacitor-High Voltage Ceramic Capacitor I-Doorknob Capacitor i-High Voltage Multi Layer Cap Capitor
Voltage HIGH CAPACITORS
High Voltage sobumba Disc Capacitors
I-HV Ceramic Disc Caps 500V ku-8KVDC
Isicelo se-HV Capacitor Isicelo
Voltage High Doorknob Capacitors
Ama-Capacitors we-High Voltage Movie
High Voltage Multilayer Capacitors sobumba
High Voltage capacitor Isicelo
Okungenziwa esikhundleni sokunye Cross Reference
Voltage HIGH resistors
Umkhiqizi we-HVC- High Voltage Ceramic Capacitors
Ingxenye Eyinhloko Yezixhobo Zama-Electronic - Imishini Yokuhlola
Ingxenye Eyinhloko Yezinto Zikagesi - Izisetshenziswa Zokuhlola
Amadivayisi kagesi abe yingxenye ebalulekile yokuphila kwethu futhi kufanele sithembele kumishini ehlukile kagesi yesakhiwo sethu futhi siwasebenzise emisebenzini eminingi yansuku zonke. Lezi zinto zikagesi zisisiza ekusindiseni isikhathi esiyigugu nemali eningi. Kungumthwalo wethu ukuhlola isimo salezi zinto njalo. Ngenxa yalokhu, kufanele sithole imishini yokuhlola.
Lezi zixhobo zingakwandisa ukusebenza kwemisebenzi evamile futhi zisisize ekubeni nokuphila okunethezeka. Kodwa kukhona ingozi eyodwa yokusebenzisa le zixhobo, njengoba kungakunika imininingwane engalungile. Kulesi simo, ungase ubhekane nenkinga kwezinye izinhlelo zokusebenza. Ngakho kufanele uthenge lezo zixhobo, eziqinisekiswa yiziphathimandla.
Kukhona ububanzi obukhulu bezinto zokuhlola emakethe. Ngemuva kokusebenzisa imishini efanele ungakwazi ukwahlulela amandla kanye namandla amadivaysi kagesi. Futhi ungaqinisekisa ikhwalithi nokusebenza kwazo zonke amadivaysi kagesi ekhaya lakho noma ehhovisi. Ngosizo lokuhlola amadivaysi, ungakwazi ukwahlulela ukusebenza kwazo zonke izinto zokusebenza zasemakhaya.
Amadivaysi okuhlola okudlulisiwe angakuqinisekisa ukuthi usebenzisa imishini yamanzi kagesi isikhathi esithile. Kumele uhlole njalo isimo samadivayisi kagesi, ngoba kukusiza ekwenzeni umsebenzi wokulungisa okudingekayo. Ukulungiswa okujwayelekile kuzokusiza ekwandiseni ukuphila okuwusizo kwanoma iyiphi idivayisi. Futhi, kukusiza ukuba uzigcine kude nemisebenzi esheshayo. Kubangele ukwanda kube yinhloko yakho.
Izigaba ezincane zamadivayisi wokuhlola zifaka amadivaysi wokuhlola okushisa, abahloli be-backplane, abahloli bebhethri, kanye nedivayisi yokuhlola ezenzakalelayo. Lezi zigaba zenziwa ngesisekelo sokusebenzisa idivayisi yokuhlola. Amadivayisi wokuhlola angashintsha ukuhlola izintambo zamagesi namabhodi. La madivaysi angahlola ukusebenza kwalawo madivayisi, aqukethe abaqhubeki abancane. Lawa madivayisi akunikeza ukuqinisekiswa kwekhwalithi yanoma yiluphi igajethi.
Amadivaysi azenzekelayo alolu hlobo yizinsiza zokuhlola eziphambili. Lawa madivaysi asetshenziswa ngosizo lwamakhompyutha ukuze ahlole ama-industrial units. Lawa madivayisi adinga amakhono ezobuchwepheshe, ngakho angasetshenziswa uchwepheshe. Lawa madivaysi ayindleko kakhulu futhi amayunithi ezimboni kuphela angawakhokhela. Loluhlobo lwedivaysi yokuhlola lungasetshenziselwa ukuhlola amabhodi wesifunda abhalwe.
Abahloli be-backplane basetshenziselwa ukuhlola abaphikisi nama-capacitors ezinhlangothini ezihlukahlukene ze-elekthronikhi. Labahloli bangakunikeza ukuxhumana okusheshayo. Zingasetshenziselwa uhlelo lokuxhumana olunempumelelo futhi olusebenzayo. Ziyaqhubeka zihlukaniswe zabahloli be-in-circuit. Labahloli abajikelezayo ngamabhodi wesifunda aphrintiwe anezihlalo ezihlukene kanye nezintambo ezihlukene futhi asetshenziselwa ukuhlola inombolo enkulu yamadivayisi kagesi.
Abahloli bebhethri basetshenziselwa ukuhlola ikhwalithi yamaseli kagesi. Labahloli bangabheka izinga lokushisa, ukumelana kwe-DC, ukushaja, i-voltage ne-amperage. Zonke izinsiza zokuhlola zisisiza ukuba sihlole izinga lensiza kagesi noma ye-elekthronikhi nganoma yisiphi isikhathi. Lawa madivaysi angasetshenziswa ekhaya, ehhovisi, nakuzo zonke izimboni. Lawa madivayisi asisiza ukuba sithathe isinyathelo futhi sihlale siphephile kusuka ezinkingeni ezizayo.
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-30 siyikhaya lenzwa yomswakama. Ukuzigqaja ngokukhethwa kwezinzwa ezinkulu kunazo zonke ezweni, sinezidingo zakho zonke.
ciroceanint@gmail.com Voltage High resistors Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa, Uphiko, Electronic, Isisetshenziswa, test
Mayelana HVC capacitor
I-HVC ngumkhiqizo ovelayo nomkhiqizi ophezulu we-high voltage ceramic capacitor ne-high voltage resistor. Isungulwe ngo-1999, ngesitshalo sokukhiqiza esingamamitha-skwele ayi-6000 eSouthern China, sikhethekile kuzakhi zamandla aphezulu, njengezigqoko ze-HV ceramic kanye nokukhiqizwa kwesiko kwe-HV. Ingxenye yethu enesipiliyoni sokushintsha ama-capacitor we-TDK, i-Vishay noma ama-voltage aphezulu kaMorgan, amukelwa kahle ngabakhiqizi bemishini esezingeni lomhlaba.
Analog Integrated Circuits Market Izingxenye omhlabajikelele nawasekhaya Isibikezelo kufika 2023 January 14, 2017
by Vishay Intertechnology Analog Integrated Circui ...
How To Nquma ngakwesokudla into yokucocobalisa January 14, 2017
by nebarnix How To Nquma ngakwesokudla into yokucocobalisa It ...
Amaphuzu amabili Ukuze Oyaziyo Electronic Test Izinsiza kusebenza Projects January 13, 2017
Matt Westervelt Amaphuzu amabili ukukwazi mayelana Electr ...
Amabhokisini Okugcina Aphansi Okugcina Ipulasitiki YePlastiki Nama-Big Bins January 13, 2017
Nge-olvegrn Amabhokisi Okugcina Aphansi E-Plastic Storage An ...
I-HVC Capacitor Manufacturing Co., Ltd.
I-9B2, i-Tianxiang Building, i-Tianan Cyber ​​Park, i-Futian, i-Shenzhen PRC
I-2012-2018 Copyright © HVC Capacitor Manufacturing Co., Ltd.
Sobumba capacitor Manufacturers
1kv ukuba 8kv
10kv capacitors Ceramic
Vishay capacitor Ukubuyiselwa
HV capacitor Isicelo
Capacitors HV sobumba